တစ်ဦးကို USB DRIVE ကနေ WINDOWS7ကို INSTALL လုပ်ဖို့ - WINDOWS ကို - 2019
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows7ကို install လုပ်ဖို့
မင်္ဂလာပါ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျနော်တို့အားလုံးမဟုတ်ကွန်ပျူတာများကိုကောင်းစွာ CD-Rom ရှိသည်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပုံရိပ် (disk ထဲက Windows7ကို install လုပ်ဖို့ပြီးသားအစောပိုင်းကဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး) ကိုမီးမရှို့နိုင်သည့်အတွက် Windows နှင့်အတူတပ်ဆင်ခ disk ကို, ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows7ကိုတပ်ဆင်စေနိုင်သည်။
အဓိကခြားနားချက်2ခြေလှမ်းများရှိလိမ့်မည်, ပထမဦးဆုံး - (ဆိုလိုသည်မှာကို USB boot record အဖြစ်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးအားလုံးတှငျပါဝငျ) ကို BIOS Boot တက် sequence ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု - တ bootable USB drive ကို၎င်း, ဒုတိယကွိုတငျပွငျဆငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
1. Windows7နဲ့တစ်ဦး bootable USB drive ကို Create
USB drive ကနေ boot ဖို့ BIOS ထဲမှာ 2. Inclusion
2.1 ကို USB Boot တက် option ကိုကနေ BIOS ထဲမှာ Inclusion
laptop ကိုအပေါ်ကို USB ကနေ 2.2 Inclusion Boot တက် (ဥပမာ Asus က Aspire 5552G)
3. Windows7ကို Install
နည်းလမ်းများစွာအတွက် bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးပါ။ ယခုငါတို့အရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်း၏တဦးတည်းစဉ်းစားပါ။ သငျသညျ UltraISO (တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် link ကို), နှင့်တစ်ဦးကို Windows စနစ်၏ပုံရိပ်နဲ့တူထိုကဲ့သို့သောအံ့သြစရာအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ UltraISO, ရုပ်ပုံများ၏ကြီးမားသောအတော်များများကိုပံ့ပိုးသင်ကွဲပြားခြားနားသောလေကြောင်းလိုင်းများမှာသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်သို့သော်ယခုတစ် flash drive ကိုအပေါ်ကို Windows နှင့်အတူပုံတစ်ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
စကားမစပ်! သင် OS ကိုအတူစစ်မှန်သော drive ကိုအတူကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုနိုင်သည်ဒီနည်းလမ်း။ (သော်လည်းပင်လယ်ဓားပြကော်ပီ, ဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်) ခြောငျးမဆိုအနေဖြင့်, အင်တာနက်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုကဲ့သို့သောပုံတစ်ပုံ၏စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီကသင်သည်ရှိရမည်!
ထိုအခါ program ကို run နှင့် ISO (အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ Screenshot) ၏လမ်းဖွင့်လှစ်။
Windows7operating system ကိုအတူပုံရိပ်၏အောင်မြင်သောဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, သင်ကို click သင့်တယ် "Bootstrap / က disk image ကိုရေး"
disc ကိုမှတ်တမ်းတင် window ကိုဖွင့်လှစ်။
Next ကိုသင်လျှောက်လွှာတင်စနစ်ကမှတ်တမ်းတင်တံ့သောအပျေါက USB flash drive ကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်
တုတ်တွေနဲ့ parameters ရွေးချ
အလွန်သတိထားပါကြောင့် သင်ဟာ2ကို USB drive ကိုဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပြီးသင်ကမှားယွင်းတဲ့သတ်မှတ်ဆိုပါစို့ ... အ flash drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှအချက်အလက်များ၏မှတ်တမ်းတင်စဉ်အတွင်းလျှင်ဖျက်လိမ့်မည်! ဒါပေမယ့် (ဒီနည်းနည်းပရိယာယ်နှင့် ပတ်သက်. သတိပေးဖို့အကောင်းဆုံးဒီတော့ပရိုဂရမျ၏ရုံဗားရှင်း, ရုရှအတွက်မကျမည်အကြောင်း) ကိုအများနှင့်အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကသတိပေးလိုက်သည်။
"Record" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်သင်ရုံစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ မှတ်တမ်းတင်မိ၏ပျမ်းမျှကြာပါတယ်။ အဆိုပါ PC ကို features တွေ၏ပျမ်းမျှ 10-15 ။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, program ကိုသင့်ရဲ့ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒုတိယခြေလှမ်းသွားဖို့အချိန်မယ့် ...
ဤအခနျးအများအပြားမလိုအပ်ပေမည်။ ဒါပေမယ့် Windows7နဲ့အသစ်ဖန်တီး bootable USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်သင်ကသင့်ကွန်ပျူတာကိုစတင်ပါလျှင် - က BIOS သို့ delve ရန်အချိန်, ရှိသမျှရှိနိုင်ရန်အတွက်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
အများစုမှာမကြာခဏ bootable flash drive ကိုသုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်စနစ်မမြင်နိုင်သည်:
1. မှားကို USB flash drive ကိုအပေါ်ပုံရိပ်ကိုဖမ်းမိ။ ဤကိစ္စတွင်ပိုမိုနီးကပ်စွာဤဆောင်းပါး၏အပိုဒ် 1 နှင့်အတူဖတ်ပါ။ ထိုအခါမှတ်တမ်းတင်ရဲ့အဆုံးမှာ UltraISO သေချာအောင်သင်တစ်ဦးအပြုသဘောတုန့်ပြန်စေတော်မူသည်ကား session တစ်ခုအမှားဖြည့်စွက်မပေးခဲ့ပါဘူး။
2. ကို USB drive ကနေ BIOS option ကို Boot တက်တွင်ထည့်သွင်းမဟုတ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်နှင့်သင်ကပြောင်းလဲပစ်ရန်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ်။
3. ကို USB Boot တက် option ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။ သင့်ရဲ့ PC အတွက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ ယေဘုယျခုနှစ်, PC ကိုသငျသညျအနှစျစုံတွဲတစ်တွဲထက်မပိုရှိပါက - ဒီ option ကိုကဖြစ်သင့်ကြောင်း ...
အဆိုပါ PC ကိုစာနယ်ဇင်းများ၏ပါဝင်မှုကို (PC ကိုမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ) ကို Delete key ကိုသို့မဟုတ် F2 ပြီးနောက် BIOS setting များကိုအတူအပိုင်းသို့ရရန်။ သင်သည်လက်ျာအချိန်တွင်စာနယ်ဇင်းကြောင်းသေချာမသိကြပါလျှင်သင်တစ်ဦးအပြာနိမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်တိုင်အောင်, ခလုတ်ကို 5-6 ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အထဲတွင်သင်က USB configuration များ (USB က Configuration) ကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ BIOS တည်နေရာကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများတွင်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပေမယ့်အနှစ်သာရအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်။ ကို USB port များ enabled ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ထည့်သွင်းလိုလျှင် - က "Enabled" ရှို့ပါလိမ့်မယ်။ အောက်က screenshots များအလေးပေးနေပါသည်!
သငျသညျ Enabled မခံခဲ့ရပါလျှင်, ထိုသူတို့ကို key ကိုလှည့် Enter ကိုသုံးပါ! ထို့နောက် download, အပိုင်း (Boot ကို) ကိုသွားပါ။ ဒီနေရာတွင် (ထို့နောက် Boot တက် HDD ကနေ CD / DVD ကိုမှတ်တမ်းတင် drives တွေကို Boot တက်မှဆိုလိုသည်မှာဥပမာအားဖြင့် PC ကိုပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးမှုများ) ကို Boot တက်ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းကို USB Boot တက်ဦးစားပေးထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ အောက်ပါပုံရိပ်မှာ, ထိုသို့သရုပ်ပြနေသည်။
ပထမဦးဆုံးအပေါ်မှာ data ကိုမတွေ့ရှိလျှင်, CD / DVD ကို Scan ကိုလည်းမရှိတဲ့ flash drive ကိုကနေ boot တစ်စစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါသည် - မျှ Boot တက် data တွေကိုလည်းမရှိလျှင်, HDD ရန်သင့်စနစ်ဟောင်းမှာ loading လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မည်
အရေးကြီး! အဆိုပါ BIOS အပေါင်းတို့၌အပြောင်းအလဲများပြီးနောက်, များစွာသောရိုးရှင်းစွာ settings ကို save ဖို့မေ့လျော့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အပိုင်းထဲက option ကို "Save နှင့်ထွက်ပေါက်" (မကြာခဏသော့ချက် F10) ကို select နောက်ထပ် ( "ဟုတ်ကဲ့") သဘောတူညီခဲ့သည်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာ reboot သွားသဖြင့်, OS ကိုအတူ bootable USB flash drive ကိုကြည့်ရှုရန်စတင်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကို flash card ကိုကနေ boot မှလက်တော့၏ဤပုံစံကိုပိတ်ထားသည်။ စာနယ်ဇင်းပု F2 မှတ်စုစာအုပ်, boot time အချိန်မှာသူကဖွင့်ဖို့, အကြာတွင် BIOS ထဲမှာ, Boot ကိုသွားပါပြီး USB, CD / DVD ကိုရွှေ့ဖို့ F5 နဲ့ F6 သော့သုံးပြီး HDD ကနေတင်များ၏လိုင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
စကားမစပ်, တခါတရံတွင်သူကမကူညီဘူး။ ထိုအခါသင်သည် HDD ကနေ Boot တက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသူတို့အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းကို USB (ကို USB HDD, USB မှတ် FDD) နှင့်တွေ့ဆုံရှိရာ, အပေါငျးတို့သလိုင်းများစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြ Boot တက်ဦးစားပေး
အပြောင်းအလဲတွေပြီးနောက်, (ဖန်ဆင်းခဲ့သမျှသောအပြင်အဆင်များထွက်သွားခြင်းနှင့်ချွေတာ) ကို F10 ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်တစ်ဦး Pre-bootable USB flash drive ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်စုစာအုပ် reboot နဲ့ Windows7၏ installation ၏အစအဦးစောင့်ကြည့် ...
ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးကို USB drive ကနေပြီးပြည့်စုံသောစက်တပ်ဆင် disk ထဲကအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ ကွာခြားချက်များသာ (အတော်လေးဆူညံအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း CD / DVD ကို) ကိုအချိန် (တစ်ခါတစ်ရံပိုရှည် disc ကို set ကို) နှင့်ဆူညံသံကိုတင်ထားရန်, ဥပမာအားဖြင့်, ရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူဖော်ပြချက်များအတွက်တစ်ခုလုံးကိုယူနစ်တူညီတဲ့ sequence ကို (ကွဲပြားမှုဗားရှင်းအသင်းတော်များ၏ကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် float သင့်သော screenshots များရှိသည်ဟုပေးပါလိမ့်မယ်။
Windows ကို install လုပ်ပါ။ ဤသည်ယခင်ခြေလှမ်းများမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလျှင်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။
စနစ်ဖိုင်တွေကို check လုပ်ပေးပါတယ်နှင့် hard disk ကိုကူးယူခံရဖို့အဆင်သင့်သည်အထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်း
ဤတွင်ကျနော်တို့က installation ကိုရှေးခယျြ - option ကို2။
ဤသည်အရေးပါသောကဏ္ဍကိုပါ! ဤတွင်ကျနော်တို့စနစ်တကျဖွစျလိမျ့မညျသော drive ကို select လုပ်ပါ။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, သင် disc ကိုမသတင်းအချက်အလက်များရှိပါက - စနစ်တနှင့်ဖိုင်များကိုဘို့တ - အပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့ချိုး။ Windows7ကိုဘို့အကြံပြု 30-50gb ။ စကားမစပ်စနစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အပိုင်းကို format နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရ!
ကျနော်တို့ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဤအချိန်တွင်ကွန်ပျူတာသူ့ဟာသူအကြိမ်ပေါင်းများစွာ reboot လိမ့်မည်။ ရုံဘာမှမထိနဲ့ ...
ဒါက window ကိုအကြှနျုပျတို့အားပထမဦးဆုံးစနစ်က startup ညွှန်ပြ
သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်အကောင့်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ကရိုက်ထည့်ပါလျှင် - သင်မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်းဦးတည်း!
သော့ကိုဒီဝင်းဒိုးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါဟာ disk ကိုအတူသေတ္တာပေါ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကရိုးရိုးလက်လွတ်အထိပါပဲ။ အဆိုပါစနစ်ကြောင့်မပါဘဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကြံပြုထားတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအခါလုပ်ငန်းစဉ် nastroete အတွက် ...
ပုံမှန်အားဖြင့် system ကိုမှန်ကန်သောအချိန်ဇုန်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများ - သင်မမှန်ကန်ကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့လျှင်။
ဒီနေရာတွင်မည်သည့်တာရှည် option ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကွန်ယက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း configure, တခါတရံတွင်မလွယ်ကူပါဘူး။ တဦးတယောက်တည်းစခရင်ပုံပေါ်မှာဖော်ပြထားမရနိုင် ...
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်, ထိုသို့လုပ်ကိုင်ဖို့စတငျနိုငျ!
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows7installation ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်သင်က USB port ကိုကနေဖယ်ရှားပစ်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောသာယာသောအချိန်လေးပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်ကိုကြည့် myzyka နားထောင်ခြင်းရုပ်ရှင်များ,, ဂိမ်းများ, etc
ဗီဒီယို Watch: Reparar o restaurar PlayStation4usando las opciones de recuperación. Modo Seguro de PS4 (အောက်တိုဘာလ 2019).